Dhammaantood waxay ku saabsan yihiin Xeerka Dib Loo Isticmaali Karo? er ... Mawduuc | Martech Zone
Arbaco, Juun 15, 2009 Khamiista, Oktoobar 29, 2015 Ball Lorraine
Anigu farsamo ma ihi! Runtii maahan, laakiin waqti badan ayaan ku qaataa saaxirrada teknolojiyadda, sida martigaliyahayga, Douglas Karr. Mid ka mid ah casharadii ugu muhiimsanaa ee aan ka bartay mid ka mid ah barnaamijooyinkii aan la soo shaqeeyay, wuxuu ahaa qiimaha koodhka dib loo isticmaali karo. In kasta oo macmiil kastaa uu jecel yahay inuu u maleeyo inay iyagu yihiin kuwo gaar ah, haddana wuxuu sharraxay mar haddii aad qorto koodh si aad u qalabayn ugu sameyso geeddi-socod, in ka badan hal macmiil ayaa awoodi doona inay adeegsadaan nidaamka iyo lambarka.
Isku fikrad ah lambarka dib loo isticmaali karo waxay khuseysaa xaalado badan oo kala duwan oo ay ku jiraan suuqgeyn. La shaqeynta milkiilayaasha meheradaha mashquulka badan oo leh ma haysto waqti ay ku qoraan waxyaabo cusub boggooda ama degelkooda, waxaan tusaa sida loo adeegsado caqliga koodhka dib loo isticmaali karo. Tusaale ahaan: War-saxaafadeedyada ama emayllada loo diro jawaabta weydiinta macmiilka ayaa noqda joornaalada, qoraalada blogga iyo tweets. Ma jirto sabab dib loogu cusbooneysiiyo giraangirta, si fudud dib ugu soo celi wixii la qoray. Mararka qaarkood? Code? ama nuxurku wuxuu u baahan yahay waxoogaa hagaajin ah oo loogu talagalay blog-ga ama dhagaystayaasha joornaalka, laakiin markii aad aasaaska yeelato inta kale way fududahay.
Anigana aniga, fudud waa erayga furaha. Ilaa iyo intaad ka noqonaysid qoraa xirfad leh ama blogger, qalabkan, WordPress, Twitter, Plaxo, Saaxiibtinimo, dhammaantood waa macno lagu gaadho himilo. Iyo natiijada ugu dambeysa waa in kordhi xiisaha alaabtaada, adeeggaaga ama sumaddaada. Iyadoo hadafkaas maskaxda lagu hayo, kooxdaydu waxay si joogto ah ugaarsi ugu jirtaa aaladaha cusub ee baloogyada si loo fududeeyo loona habeeyo nidaamka. Waxayna u muuqataa in dhowrkii toddobaadba mar uu mid soo saaro wax cusub. Waqtigan xaadirka ah kuwa ugu cadcad ayaa ah TweetDeck iyo Mar dambe.
TweetDeck ? Sababtoo ah waxaan u maamulnaa waxyaabaha ku jira xisaabaadyo badan oo macmiil ah, waxaan jeclahay xaqiiqda aan u abuuri karo kooxo xiriiro ama baaritaanno qaas ah macmiil kasta. Cusboonaysiinta cusub waxay ii oggolaaneysaa inaan si fudud uga beddelo isticmaalaha una adeegsado isdhexgalka waqtiga dhabta ah.
Tani had iyo jeer waa qaabka aan doorbido ee isdhexgalka ee Twitter, laakiin meel walba ma wada joogi karo hal mar, sidaas darteed waxaan ugu kalsoonahay TweetLater si aan u ilaaliyo muuqaalkeyga marka aanan halkaas joogi karin. Uma adeegsado tan in badan xisaabteyda Twitter-ka, laakiin waa wax laga naxo macaamiisha sida ururada tababarka oo leh ogeysiisyo joogto ah iyo casriyeyn casri ah. U dirista layli hawsha, waxaan maalin walba haysannaa Tweets loo qorsheeyay illaa dhammaadka Sebtember. Waan ku boodayaa markaan haysto waqti badan, laakiin TweetLater ayaa ii haysa heer aasaasi ah oo firfircoon.
Hal feker oo kama dambeys ah, way fududahay in lagu buuxiyo dhammaan xulashooyinka. Soo jeedintayda, soo qaado waxoogaa shaqeeya, oo si fiican u isticmaal iyagaana natiijooyin soo saari doona.